Shilkii dayuuradeed ee saaka oo kiciyey dood ku saabsan dab-damis dhex yaalla Garoonka Dayuuradaha Garoowe | Hadalsame Media
Home Wararka Shilkii dayuuradeed ee saaka oo kiciyey dood ku saabsan dab-damis dhex yaalla...
(Garoowe) 02 Dis 2020 – Shil dayuuradeed oo cabsi leh balse laga badbaadey ayaa saaka ka dhacay Garoonka Dayuuradaha magaalada Garoowe ee xarun-goboleedka Puntland.
Dayuuradda oo laga leeyahay dalka Jabuuti ayaa siddey rakaab fara badan, waxaana la sheegayaa in ay cilladu la xiriirto taayarro furmi waayey taasoo keentay in ay dayuuraddu dhulka caloosha ku dhufato, gaar ahaan qaybaha dambe iyo geeska.
Yeelkeede, sheekada shilkan ayaa waxaa iminka ka dhex dhalatay mid kale oo aan ka xasaasiyad yarayn, waxaanay ku saabsan tahay gaari dab-damis ah oo dhex yaalla Garoonka.
Maadaama uu shilka dayuuradda dab ka kici karey ayay dadku soo xusuusteen dab-damiska meesha yaalla, ha yeeshee, markii loo dhowaadey waxaa soo baxday in ay ka maqan yihiin taayarrada qaarkood.
Arrintan oo haatan aad loo hadal hayo ayay dadku ku micneeyeen xisaabtan la’aan, dayacaad iyo mas’uuliyad xumo, maadaama uu dab-damisku yahay sheey loogu tala galay gurmad aan waqtiyaysnayn oo ay tahay inuu daqiiqad kasta darban yahay.
Previous article”Waa inaan u tashannaa Turkiga!” – Machad sheegay in wixii ay daroonnada Turkigu ku dhigeen Armenia ay ku dhici doonaan dal kasta oo Yurub ah
Next article”Xiriirka Qadar & Khaliijka waxaa lagu hagaajin karaa saacado gudohood” – Sucuudiga oo mowqif debecsan istaagey